विकासको नाममा विनासको खेल, पोखराका चौताराहरु मासिने क्रम रोकिएन - Sarangkot NewsSarangkot News
विकासको नाममा विनासको खेल, पोखराका चौताराहरु मासिने क्रम रोकिएन
19 June, 2020 6:45 pm
पोखरामा चौतारो मास्ने र जोगाउने वीचको रस्साकस्सी अझै जारी छ । वर पिपल र समीका दशकौ पुराना चौताराहरु मासेर कंक्रिटको निकास र घडेरीको विकास गर्ने पात्रहरु विभिन्न वहानामा सकृय रहेको पाइन्छ धार्मिक आस्था र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि सर्वोत्तम र सद्गुणी प्रमाणित चौताराहरु केहि वर्षदेखि जंगे आरोका शिकार वन्न पुगेका छन् । कंक्रिटका कथित विकासे योजनाका नाममा जरो मुरो देखिनै चौतारो मास्नेहरुले लाखौं मान्छेहरुको मनमा तिर रोपेका छन् ।
पुर्खाले हुर्काएको वर पिपल र समीका चौताराहरु संयौका संख्यामा उन्मुलन गरिएका छन् । पोखराका धेरै सडक किनाराहरुमा रहेका चौताराहरु रातारात काटिएनन् मात्र दिन दहाडै मासिए पनि चौतारा संरक्षण अभियानमा सकृय अभियान्ताहरुको आँखा छलेर व्यक्तिगत आर्थिक र व्यापारिक स्वार्थका हेतुले चौताराहरु मासिएको पाइएको छ । केहि शक्तिकेन्द्र र टाठावाठा भूमाफियाले सडक किनारा र विभिन्न चोकहरुका चौताराहरु ढालेर पर्यावरणमाथि गंभिर हमला गरेका छन् । पोखराका कति चौताराहरु मासिय, हटाइए भन्नेवारेमा राज्यको कुनै निकायसँग त्यसको आधिकारिक तथ्यांक समेत छैन । जसको शक्ति उसको व्यक्ति भने झै कतिपयले चौतारा मासेर कंक्रिट विल्डिङ समेत वनाएको जनाकारहरु वताउँछन् ।
प्रहरीकै अगाडि ढालियो चौतारो
पोखराको मूख्य चोक त्यो पनि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको ठिक अगाडि रहेको समीको चौतारो जेष्ठको अन्तिम साता मासिएको छ । दैनिक संयौ मान्छेले सुस्ताउने उक्त चौतारो नाला विस्तारको सिकार वन्न पुगेको देखिन्छ । पृथ्वीचोकबाट खनिएको नालाबाट चौतारो जोगाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि केहि दशक मात्र पुरानो उक्त चौतारो जरो मुरै उखेलिएको छ । सितल, हरियाली दिदै आएको चौतारो मासेपछि पृथ्वीचोकको ट्राफिक परिसर (गोलघर) चोक उजाड देखिएको छ । चौतारो संरक्षण अभियानमा संलग्न पत्रकार शिवराज वस्ताकोटी चौतारो मासिएको घटनाप्रति रुष्ट वनेका छन् । ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको छेउमै भएको रुख जोगाउन नसक्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरी प्रति उनले आक्रोस व्यक्त गर्दै चित्त दुखेको वताए । उनले भने यस अघिपनि त्यो चौतारो मास्ने दुष्प्रमाण भएको वेला तत्कालिन ट्राफिक प्रमुख र आफूहरु समेतको पहलमा चौतारो जोगाएको अनुभव सुनाए ।
यस पटक भने जिल्ला ट्राफिक प्रमुख प्र.नि. सन्तोष रोकाले आफ्नो आगँनमै सितलता दिएको चौतारो संरक्षणको प्रयास समेत गरेनन् । त्यस्तो चौतारोमा डोजर चल्दा मौनता साधेर बस्न सक्नेहरुले वातावरणीय महत्व वुझन् नसक्नुका कारण पोखरेली परिचय वनेको चौताराहरु अव इतिहासका पानामा खोज्न नपर्ला भन्न सकिन्न ।
चौतारो संरक्षण अभियानले कानूननै वन्यो
खासगरी पोखरामा रहेका चौताराहरु श्रृंखलावद्ध रुपमा मासिने क्रम तिव्र रुपले वढेपछि संरक्षण अभियन्ताहरु रामबहादुर पौडेल, चन्द्र बहादुर गुरुङ, लोकदर्शन कोइराला, आशिमा थापा लगायतको निरन्तर पहल स्वरुप चौतारो मासिने क्रममा गिरावट आएको तथ्यांकले वताउँछ । त्यति मात्र हैन वर, पिपल र समीका चौताराहरु मास्ने कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरिएको थियो । अदालतले चौतारा काट्न रोक्ने आदेश भएको थियो । अदालतको आदेश पछि पनि कतिपय ठाउँका चौताराहरु मासिएका छन् त्यस तर्फ चौतारा संरक्षण अभियन्ताहरुले आपत्ति जनाउँदै आएकाछन् ।
गण्डकी प्रदेशले ऐन वनायो नियमावली वनाएन !
नेपालमा गण्डकी प्रदेश संसदले वर पिपल समि र चौतारो संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरेको छ । मिति २०७५ माघ २७ गते प्रमाणिकरण भएको ऐनले वर पिपल, समिका वृक्ष र चौतारो संरक्षण गर्ने धेयले ऐन वनाएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली ल्याउन नसक्दा ऐनको कार्यान्वयनमा वाधा पुगेको छ । संसदले ल्याएको वर पिपल, चौतारो संरक्षण ऐन २०७५ ले वर पिपल समिको महत्वमाथि गरिमा थपेको छ । ऐनले वर पिपल, समि र सोको चौतारो संरक्षणको जिम्मा स्थानिय तहको सरकारलाई दिएको छ । वर पिपल समि दर्ता गर्नु पर्ने, संरक्षण गर्नु पर्ने मात्र हैन ति रुख तथा चौताराहरुमा योजना पर्ने भए विकल्प खोजेर चौतारो जोगाउनु पर्ने उल्लेख छ । विकल्पै नभएमात्र चौतारा हटाउन पर्ने र चौतारा हटाउँदा स्थानीय सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको ५ सदस्यीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिको निर्णयको आधारमा मात्र गर्ने उल्लेख घाटा ७ मा उल्लेख छ । जसमा डिभिजन वनका वन अधिकृत, सम्वन्धित वडा अध्यक्ष, योजना प्रमुख र स्थानिय तयका प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित टोलीको सिफारिसमा मात्र वर पिपल र समीको चौतारो हटाउन मिल्ने देखिन्छ । तर कार्यदलका एक सदस्य डिभिजन बन कार्यालय कास्कीका प्रमुख रामकाजी श्रेष्ठ उक्त चौतारो काटिएको बारे कुनै जानकारी समेत नभएको बताउँछन् ।
प्रदेशले वनाएको ऐन जारी भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा ऐनलाई धोती लगाउँदै पृथ्वी चोकको चौतारो यसै हप्ता काटिएको छ । नाला विस्तार गर्दा केहि सावधानी अपनाइएको थियो भने चौतारो पनि नमासिको र नालापानी वन्न सक्ने अवस्था रहेको वुझिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालय पोखराको योजना मुताविक चौतारो काटिएको खुल्न आएको छ । सडकको नाला वनाउने क्रममा नाला वांगो वनाउँदा पछि समस्या आउने देखेर चौतारो हटाइएको मेयर मान बहादुर जिसीले सराङकोटलाई वताए । यस्तै सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर रमेश पौडेलले पनि सडक र महानगरको सल्लाहमा चौतारो हटाइएको स्वीकार गरेका छन् ।
चौतारो जोगाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै हटाउँदा चौतारो संरक्षण ऐन वमोजिमको समितिले त्यसतर्फ केहि सोच्न नसकेको अवस्था छ । वातावरण, पर्यावरणीय रुपले उच्च महत्व राख्ने यस्ता वर पिपल समीका चौताराहरु जोगाउन आवश्यक छ, संरक्षकहरुनै भक्षक हुन थालेपछि अभियन्ताहरु वीच व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोस फैलिएको अवस्था छ ।